भीम रावल मन्त्री हुँदा सबै राम्रो हुने, मन्त्री हुन नपाएपछि सबै बिग्रने ? « Dainiki
१३ माघ २०७६, सोमबार ०८:१०
– पर्दाफास गर्ने जिम्मेवारी उहाँलाई कसले तोकेको छ ? यस्तो जिम्मेवारी कुन तत्वले दिएको छ ? उहाँ देशभक्त अरु सबै देशघातीजस्तो गरी जसरी प्रस्तुत भइराख्नुभएको छ, योभन्दा वाहियात र तथ्यहीन कुरा केही पनि होइन । बालुवाटारबाट उहाँलाई किन धम्की दिनु ? सूर्य थापा कसैको हत्याको, धम्कीको कुरामा विश्वास गर्दैन । भीम रावलजी अगुवापछुवा सुरक्षा घेरामा डेढ दर्जनभन्दा बढी सुरक्षाकर्मीसहित सरकारी प्रबन्धमा नै सुरक्षित हुनुहुन्छ । उहाँ रक्षामन्त्री, गृहमन्त्री र उपप्रधानमन्त्री भइसकेको मान्छे हो । उहाँलाई हामीजस्ता मूलतः लेख्ने, पढ्ने काम गरेर आएका मान्छेहरुले धम्की किन दिने ? एउटा कुराचाँहि म तपाइलाई स्पष्ट भन्न चाहन्छु, हिजो राजकुमारी डायनालाई पापराजीहरुले जसरी घेरिरहेका थिए आज सरकार विरोधीहरुले, पार्टी विरोधीहरुले भीम रावलजीलाई त्यसैगरी घेरिरहेका छन् ।
यो मैले लेखेको स्टाटस हो, कुनै धम्की होइन । हत्या तथाकथित धम्कीको कुरा उहाँले गरेको अपव्याख्या हो । हत्याको धम्कीको कुरा गरेर नकारात्मक र असन्तुलित भइरहेको दिमागको हदमा पुग्न उहाँलाई नै जिम्मा दिउँ । अहिले भ्रम पैदा गर्ने गरी रावलजी जत्तिको नेतालाई राजपरिवारको घेराबाट जसरी डायनालाई पापराजीहरुले घेरेर उनलाई समाचारका लागि पछ्याउथे, रावलजीलाई पनि सरकार विरोधीको रुपमा विषयवस्तुलाई बंग्याउन त्यसैगरी पछ्याइरहेका छन् । यो उहाँले किन गरिरहनुभएको छ ? बुझ्नु भएको छ कि छैन भनेर मैले भनेको अवश्य हो । तथ्य के हो भने उहाँ एक्लो बृहस्पतिजस्तो बन्न आवश्यक छैन । पढाइलेखाइ भएका वा नभएका र तथ्य बुझ्ने धेरै मान्छे यहाँ छन् । रावलजी मन्त्री हुँदा असाथ्यै हर्षित हुनुहुन्छ, मन्त्रीबाट बाहिर हुँदा असाध्यै छट्पटिनु हुन्छ, यसो किन गर्नुभएको होला भनेर मैले भनेको हो । सरकारका राम्रा कामको पक्षमा, पार्टीको पक्षमा तर्कबहस र छलफल गर्ने दायित्व उहाँको पनि हो । प्रतिपक्षलाई उछिनेर वा माथ गरेर निराशा छर्ने, तथ्य बंग्याउने र आत्मनिन्दा गर्ने काम उहाँले गर्ने होइन, एक्लो बृहस्पतिजस्तो हुनखोज्ने काम गर्ने होइन है भनेको हो । यो त मैले अहिले पनि भन्छु ।
– आज उहाँले जेजे बोलिरहनुभएको छ नि, भोलि चुनावमा जाँदा थाहा पाउनुहुन्छ– उहाँले बोलेका कुराहरु कसरी जनतामा प्रशारण गरिने छन्, सुनाइने छन् र पार्टीका बारेमा, सरकारका बारेमा, सरकारका कामहरुको बारेमा उहाँले भनेका कुराहरुलाई उहाँकै मतदाताहरुलाई दिगभ्रमित पार्नका लागि प्रयोग गरिने छन् ? उहाँ आज बोलिरहेका कुराहरु त्यसका निम्ति दुरुपयोग गरिने छन् । त्यतिखेर आज उहाँलाई विभिन्न उद्देश्यले उचाल्नेहरु कसैले पनि साथ दिने छैनन् । पार्टीका इमान्दार नेता कार्यकर्ताहरु, नेकपालाई माया गर्ने मतदाता अनि यो देशलाई माया गर्ने जनताले मात्र साथ दिने छन् । रावलजी तिनै जनताको बलमा यहाँसम्म आइपुग्नु भएको हो । रावलजीले लाइसेन्स दिएर देशभक्त हुने, अन्यथा नहुने होइन ।
देशभक्ति आफ्ना कर्मले, आफ्ना व्यवहारले, आफ्नो पौरखले, देशप्रतिको मायाममताले र देशप्रतिको इमान्दार सेवाभावले प्रकट हुने कुरा हो । यस्ता एकदुई प्रकरणमा म देशभक्त भएँ भनेर हिजो पनि अनेकन् मान्छे निस्किएका थिए । तिनीहरुले आफूलाई कति टिकाए ? आज कहाँ छन् ? रावलजीलाई देशभक्तका रुपमा यो पार्टीले नै चिनाउने हो । पार्टीको संरचनाले चिनाउने हो । व्यक्तिका रुपमा एक्लो बृहस्पति बनेर, सरकारको निरन्तर आलोचना गरेर उहाँका एजेण्डाहरु आज के भएका छन् ? सिके राउतलाई बिखण्डनकारी धन्दाबाट राष्ट्रिय राजनीतिको मूलधारमा ल्याउँदा उहाँको किन टाउको दुख्छ ? शून्य उपस्थिति भएको ठाउँमा २ वटा सिट लाभ हुने गरी राजपासँग भएको सम्झौतामा उहाँको किन चित्त दुख्छ ? अनि देशभक्तिको कुरा किन ठाउँ कुठाउँ ? मचाँहि यो प्रश्न सोध्न चाहन्छु ?
रावलजीले पनि किताबमा पढेका आधारमा आफूलाई हिरोका रुपमा प्रस्तुत गर्ने प्रयाश गर्न आवश्यक छैन । उहाँ उपप्रधानमन्त्री हुँदा, पर्यटनमन्त्री हुँदा, रक्षामन्त्री, गृहमन्त्री, हुँदा वा कृषि र वनमन्त्री झलनाथ खनालकोे स्वकीय सचिव हुँदा के गर्नुभयो ? विभिन्न समितिमा हुँदा के गर्नुभयो ? चन्द्र शम्शेर राणाले सतीप्रथा उन्मूलन गरे । कमराकमारी प्रथा उन्मूलन गरे । रावलजी हाम्रो पार्टीको नेता हुनुहुन्छ । सुदुरपश्चिम क्षेत्रमा आज पनि छाउपडी प्रथा छ भन्दा उहाँ किन बुरुक्क उफ्रिने ? त्यसको अन्त्य गर्नका निम्ति उहाँको के भूमिका रह्यो त ? उहाँजस्ता नेताहरुको के भूमिका रह्यो त ? आफूले टेकेको जमिन र आफूले खामेको आकाशमा उभिएर भूमिका खेल्ने होइन र ? सामाजिक परिवर्तनमा सकारात्मक भूमिका खेल्ने हो भन्ने कुराको हेक्का राख्नुपर्छ कि पर्दैन ?
तर अहिले परिस्थिति कस्तो छ भने, मानौं भीम रावलजी नभइदिएको भए देशभक्तिको कुरा कसले उठाइदिन्थ्यो जस्तो गरिरहनु भएको छ । यस्ता वाहियात कुरा नगरौँ । केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारका कामहरु देशको हितमा भएनन्, अनि रावलजीले देशभक्तिको कुरा गरेर मानौँ यो देश चलेको छ, राष्ट्रियता जोगिएको छजस्तो कुरा नगरौँ । उहाँले सरकारलाई कहाँ समर्थन गर्नुभयो ? पार्टीलाई कहाँ प्रतिरक्षा गर्नुभयो ? यो मूल विषय हो । उहाँ मन्त्री हुँदा सबै राम्रो हुने, मन्त्री नहुँदा सबै नराम्रो हुने त होइन नि ! यस्तो पनि हुन्छ ?
अकस्मात् भारतले राजनीतिक नक्सा सार्वजनिक ग¥यो । त्यो नक्साचाँहि अहिले होइन, शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुँदा जारी गरिएको नक्सा नै हो । त्यसपछि परराष्ट्र मन्त्रालयले एकतर्फी रुपमा सार्वजनिक गरेको नक्सा स्वीकार्दैनौ भन्यो । प्रधानमन्त्रीज्यूले सर्वदलीय, सर्वपक्षीय बैठक बोलाएर त्यो नक्सा मान्दैनौं भनेर कूटनीतिक पहलद्वारा टुंग्याउने भन्नुभयो । जनवरी १ मा भारतका प्रधानमन्त्रीले टेलिफोन गर्नुहुँदा पनि प्रधानमन्त्रीज्यूले यस विषयमा कुरा राख्नुभएको छ । र, यो विषय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीकै नेतृत्वमा समाधान हुन्छ । हामी नेपालको एक इन्च जमिन कसैलाई दिन्नौं र कसैको एक इन्च जमिन लिन पनि चाहन्नौं ।
– उहाँ भीम रावलजस्तै भएर चल्नुहोस् । मदन भण्डारी, पुष्पलाल, कृष्णलाल, लेखनाथ वा अरु सम्मानित व्यक्तित्वजस्तो त उहाँ हुँदै होइन । उहाँ भीम रावल मात्र हो । उहाँले विषयवस्तुलाई यसरी विषायन्तर गर्नु आवश्यक छैन । सरकारलाई खुइल्याउने हिसाबले चलिरहँदा उहाँ देशभक्त भएको, राष्ट्रवादी भएको धेरैलाई लागेको होला, तर यो सब मिथ्या प्रपञ्च हो । उहाँ हाम्रो पार्टीको नेता, स्थायी कमिटी सदस्य, लामो समयदेखि पार्टीमा लागेको नेता, सुदूरपश्चिम प्रदेशमा पार्टीले भरोसा गरेको एक नेता र इन्चार्ज हो । त्यसैले उहाँले आफूले टेकेको जमिनलाई किन बिर्सनुहुन्छ ? उहाँप्रति म आक्रामक छैन ।
पार्टी कामको एउटा सन्दर्भमा उहाँले मिडिया ब्रिफिङ गरेपछि पार्टीको प्रवक्ताजस्तो गर्ने काम उहाँको होइन । म पार्टीको प्रचार विभाग उपप्रमुख भएको नाताले यो तरिका मिलेन भनेको थिएँ । त्यसपछि व्यक्तिगत रुपमा उहाँ मेराबिरुद्ध विभिन्न तवरले लाग्नुभयो । कहिले १० महिनाको बालक हुनुहुन्थ्यो भन्नुभयो । मभन्दा अगाडि उहाँ जन्मिनु भयो त त्यसमा मेरो के दोष भयो ? उहाँले कुनै एउटा पर्चा छर्दा म १० महिनाको थिएँ त त्यसमा मेरो के अयोग्यता भयो र उहाँको कुन त्यत्रो योग्यता भयो ? मान्छे पहिले जन्मिन सक्छ वा पछि जन्मिन पनि सक्छ । पछि जन्मेका मान्छेले सही कुरा गर्नैहुन्न त ?